Nzira yekuderedza saizi remafaira ePDF? | ECommerce nhau
Nzira yekuderedza saizi remafaira ePDF?
PDF (Inotakurika Gwaro Fomati) fomati fomati iyo yakatora zvese zvinhu zvegwaro rakadhindwa semufananidzo wemagetsi unogona kutariswa, kubhurugwa, kupurindwa, kana kutumirwa kune mumwe munhu. Mafaira ePDP anogadzirwa achishandisa Adobe Acrobat, Acrobat Capture, kana zvimwe zvakafanana zvigadzirwa.
Kuti utarise uye kushandisa mafaera, iwe unoda iyo yemahara Acrobat Reader, iyo iwe yaunogona kurodha pasi nyore. Paunenge iwe watora pasi iyo Reader, inotanga otomatiki kana iwe uchida kuona iyo PDF faira.
Mafaira ePDF anonyanya kubatsira kumagwaro akadai semagazini zvinyorwa, mabhurocha ezvigadzirwa, kana mapepa anotsvaga kwaunoda kuchengetedza yekutanga graphic tarisa pamhepo. Faira rePDF rine imwe kana anopfuura mifananidzo yemapeji, imwe neimwe inogona kuwedzerwa kana kuderedzwa. Unogona kukwira nekudzika iro peji.
1 Mafaira ePDF: sei kwavo compression
2 Maitiro ekuona saizi yegwaro rako rePDF
3 Deredza saizi kana uchichengeta muIzwi
4 Shandisa chishandiso chePDF chekushandisa
5 Iwe unogona kutsanangura muchidimbu chii chinonzi PDF compression?
6 Otomatiki inoshanda sei mukumanikidza maitiro?
7 Maitiro 2. Gadzira PDF diki uchishandisa Microsoft Word
8 Dzvanya uye udzikise saizi yemifananidzo yePDF
Mafaira ePDF: sei kwavo compression
Chigadzirwa cheAcrobat icho chinokutendera iwe kuti ugadzire mafaera ePDF anotengesa mune isiri-zvakare-inotyisa mutengo renji. Imwe isiri-Adobe imwe chigadzirwa chinonzi Niknak kubva ku5D, kambani iri kuUK. (Muverengi pachawo akasununguka uye anogona kushandiswa se plug-in pamwe newebhusaiti yako kana inogona kutangwa yega). Mamwe mamiriro ezvinhu mune mafaera ePDF anodikanwa anosanganisira:
Graphic dhizaini kuvandudza umo nhengo dzechikwata dzinoshanda kure uye nekudaro dzinofanirwa kutsvaga dhizaini dhizaini online
Helpdesk vanhu vanoda kuona iro rakadhindwa bhuku iro vashandisi varinotarisa
Kugoverwa pamhepo chero runyorwa rwakadhindwa mauri kuda kuchengetedza ayo akadhindwa
Acrobat mafaera ePDF ari kupfuura mifananidzo yemagwaro. Mafaira anogona kupinza typeface mafonti kuti iite kuti iwanikwe chero kwauri kuona. Izvo zvinogona zvakare kusanganisira zvinofambidzana zvinhu senge mabhatani ekupinda mafomu uye nekumisikidza ruzha uye Quicktime kana AVI mafirimu. Mafaira ePDP akagadzirirwa webhu nekuratidzira zvinyorwa pamberi pemifananidzo yakajeka uye ma hypertext link.
Vashandisi vanowanzo shamisika kuti vangadzikise sei saizi yeiyo faira rePDF kuona kuti inogamuchirwa nedare redzimhosva manejimendi uye nekudaro ichibudirira kudura zvemagetsi.
Kune huwandu hwakazara hwemitemo nezve saizi refaira, zvinoenderana nehurongwa hwehutungamiriri hunoshandiswa kugadzirisa mafaera aunogamuchira. Zvakakosha kutarisa mitemo yemunharaunda mudare rako pamberi.
Muzhinji, zvisinei, pane chikonzero chidiki kwazvo chekuti maPDF ave mazana emamegabhayithi muhukuru, kunze kwekunge vaine humbowo hunofanirwa kuchengetwa semifananidzo yepamusoro-soro. Nekutevera mashoma mashoma matanho, kunyangwe makuru mafaera ari mazana emapeji haafanire kudarika 10MB.
Maitiro ekuona saizi yegwaro rako rePDF
Kana iwe ukashandisa Adobe Acrobat, kutarisa saizi yePDF yako kuri nyore. Ingotinya Faira, wozoti Zvivakwa. Iwe uchaona yakawanda ruzivo nezvegwaro rako, kusanganisira saizi yayo.
Neimwe nzira, iwe unogona kuenda kune iyo folda ine gwaro, kurodha-kurudyi kwariri, wobva wadzvanya zvivakwa.
Mafaera mahombe anotora nguva yakareba kuti atakure, anonetsa kugovana nemagetsi (semuenzaniso, kuburikidza neemail), uye ichapedza yako femu yemutemo kuchengetedza faira nekukurumidza. Zvakare, kunyangwe matare achigamuchira hukuru hwemafaira, ivo vanofarira kubata madiki, akawedzeredzwa mafaera.
Saka iwe unofanirwa kuita sei nezvekudzora saizi yemapepa ako ePDF? Heano mashanu anokurumidza matipi.
Dzivisa kuongorora maPDF pese pazvinogoneka
Chinhu chisina kujairika kufunga kuti, kugadzira maPDF, kana kusanganisa magwaro akati wandei uye kufumurwa muPDF imwe chete, unofanirwa kuprinta zvese nekuzviongorora pamwe chete. Mafaira anoshandurwa nemagetsi kazhinji ari madiki muhukuru kupfuura mafaira akaongororwa.
Zvinyorwa chete zvinongowanikwa pabepa zvinoda kuongororwa; zvimwe zvese zvinyorwa zvinogona kushandurwa nemagetsi kubva kune iyo yekutanga faira nekuzvichengeta sePDF. Zvakare, zvinyorwa zvega zvinogona kukurumidza kusanganiswa sePDF vachishandisa software yakadai seAdobe Acrobat, vachidzivirira kukosha kwekudhinda magwaro kuzvibatanidza.
Sevha se "Diki PDF"
Kana faira rako richiri rakakura kwazvo mushure mekunge rave kugadzirwa zvemagetsi, panzvimbo pekuchiongorora, kuchine matanho mashoma aunotora. Chakareruka ndechekuchengetedza -zve rako faira seyakadzikiswa-saizi PDF.
Mune vhezheni yazvino yeAdobe Acrobat, vhura iyo PDF iwe yaunoda kusevha zvakare sediki faira, sarudza Faira, Sevha Seimwe, uyezve Diki PDF. Iwe unozobvunzwa kusarudza iyo vhezheni inoenderana yaunoda uye ipapo unogona kudzvanya OK kuti uchengetedze. Tinokurudzira kuti iwe ugadzirise kuenderana kwayo pamwe neAcrobat X, sezvo vhezheni iyi ichiri kushandiswa zvakanyanya.
Shandisa Adobe Acrobat PDF Optimizer
Dzimwe nguva iwe unoda kuve neakawanda masimba pamusoro pezvinhu zviri mugwaro rako zvakadzikiswa kana kubviswa. Mune aya mamiriro ezvinhu, iwe unofanirwa kusarudza chishandiso chePDF yekushandisa.
Usati wagadzirisa faira, izano rakanaka kuongorora nzvimbo yekushandisa faira: tarisa kuti ndezvipi zvinhu, semafonti, mifananidzo, nezvimwe, zviri kushandisa iro dhata. Mhedzisiro yeiyi inogona kukupa mazano pane kwazvinofanira kudzikisa saizi refaira.
Kutanga optimization, vhura yako PDF muAcrobat, tinya Faira, Sevha Sezvimwe, wobva wadzvanya Yakagadziridzwa PDF. Mubhokisi rebhokisi rinowoneka, baya Audit Space Usage mukona yekumusoro yekona.
Deredza saizi kana uchichengeta muIzwi
MuIzwi, kushandura gwaro kuita PDF, iwe unoshandisa iyo Sevha As sarudzo. Iyi sarudzo inowanzo gadzira faira diki, zvichienderana nenhamba yemifananidzo iri mugwaro. Nekudaro, kana iwe ukaona kuti yako PDF yakashandurwa kuIzwi ichiri yakanyanya kukura, pane imwe sarudzo muIzwi iyo ichagadzira iyo yakanyanya kudiki faira. Heano maitiro ekuishandisa:
Vhura iro gwaro reIzwi kuti uchinjirwe kuPDF. Dzvanya bhatani reFaira uye wozoti Sevha As. Mune iyo Sevha Semhando menyu, sarudza PDF uye isa rako raunofarira zita refaira. Heino danho rekuwedzera: iko kwarinoti Gadzirira pazasi pebhokisi, sarudza Hushoma saizi (kutumira online).
Shandisa chishandiso chePDF chekushandisa
Zvimwe zvishandiso zvePDF (kwete kubva kuAdobe) kazhinji zvine maficha anoderedza saizi rePDF yako. Nekudaro, kana iwe uchitsvaga yemahara sarudzo, kune mashoma aripo. Parizvino inonyanya kurodha yemahara PDF musiki (sekureva download.com) ndeye PrimoPDF.
Paunenge iwe waisa PrimoPDF, ingovhura iyo PDF iwe yaunoda kumanikidza (muAcrobat Reader, kana webhu browser, semuenzaniso), tinya Ctrl + P kuvhura iyo yekudhinda dialog, sarudza PrimoPDF kubva pane runyorwa rweanowanikwa maprinta, uye wobva wadzvanya. Gadzira PDF.
Ziva kuti iyi nzira, sekungochengetedza seyakadzikiswa-saizi PDF muAdobe Acrobat, inoderedza mhando uye kugadzirisa kwechifananidzo.
Kana zvasvika pakuchengetedza nzvimbo pakombuta yako yeMac, pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita: kurasa tsvina, bvisa vanoisa mashandisirwo, bvisa mafaera akateedzana, nezvimwe zvakawanda.
Iwe unogona zvakare kudzikisa saizi refaira rezvinyorwa zvePDF kuti zviwedzere kuomarara uye kutora nzvimbo shoma pane yako Mac.
Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti kuita izvi kunogona zvakare kudzikisira mhando yeiyo yekutanga PDF.
Kana iwe uchida yepamusoro-soro PDF yehurukuro kana basa rekupa, ungangoda kushandisa imwe nzira yekuchengetedza nzvimbo, senge kuichengetera kune gore-based backup system kana yekunze hard drive.
DF kumanikidza kunogona kubatsira kudzikisa mutengo wekugovana, kuchengetedza, uye kuendesa mafaera kune iro gore. Inomhanyisa maitiro ekusaurisa, kurodha pasi, kupurinda kana kubatanidza PDF, sezvo idiki saizi, inokurumidza kugoverwa.
Saka ndeipi nzira yepamusoro yekutora mukana kune ese mabhenefiti ayo ekumanikidza ePDF aanopa? Angela O'Donnell anozvitsanangura nekupindura mibvunzo yedu pazasi.
Iwe unogona kutsanangura muchidimbu chii chinonzi PDF compression?
Kudzvinyirira kwePDF kunorongazve iyo data mufaira rePDF, kuchichengetedza zvakanyanya kuitira kuti igone kudzikisa saizi yayo pasina kurasikirwa neruzivo rwakakosha mukuita. Kugadzirisazve data kunogona kureva kuti mifananidzo yakadzoserwa uye / kana kugadziridzwa kudzikisa saizi refaira.
Ko kana mafaera angu anoda kumanikidzwa asiri ePDF? Automation inouya inobatsira mune ino kesi, sekushandurwa nemaoko mazana, zviuru, kana kunyangwe mamirioni ezvinyorwa kuita PDF ibasa rinotyisa.
Vatungamiriri vanogona kunongedza otomatiki shanduko sevhisi kune gwaro repositi, senge makuru magwaro manejimendi masisitimu (DMS), Dropbox, SharePoint, kana kunyangwe dhairekitori rimwe chete paWindows network, uye chinyararire shandura zvinyorwa kuita PDF kumashure.
Otomatiki inoshanda sei mukumanikidza maitiro?
Panzvimbo pekushandisa kumanikidza kumafaira nemaoko rimwe nerimwe, otomatiki yekumanikidza sevhisi inogona kugadzirisa vhoriyamu hombe yemafaira mune yako repository uchienderera. Nenzira iyi, rese basa rekumanikidza rinoitwa chinyararire kumashure pasina chikonzero chekuti vashandisi vabatanidzwe mushure mekutanga setup.
Rudzi urwu rwekutsikirira otomatiki ibasa rine simba, rinofukidza zvese zvinyorwa, zvisinei nekuti vakapedzisira sei mugwaro rako rekuchengetedza.
Iwe unoshuva here kuona izvo zvoga michina yekumanikidza inotaridzika? Iyi inobatsira infographic inopa muongororwo wekuti inoshanda sei pamwe chete ne otomatiki OCR yekugadzirisa sevhisi.
Kuderedzwa kwePDF mafaera kune akakwana saizi, achikupa iwe mana akasiyana saizi sarudzo.
Iko kurongwa kwePDF nemabheti anoverengeka, indexing, watermark, nezvimwe. zvinogoneka kana uchishandisa PDFelement Pro.
Iyo batch yekugadzirisa sarudzo inoita kuti hupenyu huve nyore kana akawanda maPDF achida kumanikidzwa, kurongedzwa, kurongeka uye kugoverwa panguva imwe chete.
Mapepanhau ePDP anogona kushandurwa kuita mafomati anoshandisika uchishandisa OCR tekinoroji.
Kubva pakuzadza mafomu ePDF, kutora data kuchengetedza mafaira ako, zvese zvinogoneka nerubatsiro rweSky nyoro PDFelement Pro yeWindows.
Maitiro 2. Gadzira PDF diki uchishandisa Microsoft Word
MS Office inozivikanwa kuti ndiyo yakanakisa PC suite yeWindows kwenguva yakareba, asi izvo vazhinji vedu tisingazive ndezvekuti nekuburitswa kweMS Office 2013, tinogona kugadzira nekugadzirisa mafaira ePDF pasina chinonetsa. Uku ndiko kusvetuka kukuru kubva kuMicrosoft uye kunobatsira vashandisi vanoda kumanikidza mafaera ePDF kuti vakwanise saizi dzezvinangwa zvakasiyana sekugovana, kuchengeta, nezvimwe.
Nhanho 1. Paunenge uchishandisa MS Word 2013, zvese zvaunofanirwa kuita kuchengetedza yako Izwi faira sePDF. Muwindo re "Sevha As" ("Faira"> "Sevha As"), sarudza PDF kubva kudonho-pasi runyorwa rine mafomati ekuburitsa uye sarudzawo "Minimum size" kubva pane zvingasarudzwa pazasi. Ichi chinhu chitsva uye chinochengetedza gwaro reIzwi sefaira rePDF mune saizi yakanyanya.
Chimwe chekutsamwisa kukuru kwekubata nefaira rePDF ndiko kukura kwefaira. Iko hakuna chakashata kupfuura email yakanamirwa mubhokisi rako rekunze kubva kune hombe rePDF faira, kunze kwekunge ichinonoka kurodha pasi PDF kubva pawebhu.
Iwe unogona sei kudzikisa saizi yegwaro rako rePDF? Kunyangwe izvi zvinoenderana zvakanyanya kubva paPDF kuenda kune imwe uye mhando yezviri mukati mayo, pane mamwe akawandisa ekugadzira maPDF sarudzo kunyanya aunofanira kunyatsoteerera. Zvishoma tweaks pano neapo zvichaenda nenzira yakareba mukuderedza megabytes yefaira rako.
Shandisa iyo "Sevha Se" kuraira.
Ino inzvimbo yakanaka yekutanga kudzikisira kuzvimba. Pese paunorova "Sevha" mune chishandiso, unopedzisira uine saizi yakakura kwazvo yefaira. Izvi zvinodaro nekuti basa racho rinochengetedza shanduko uye richivawedzera kune iyo faira. Izvo zvinoenda kumafaira ePDF.
Pane kudaro, shandisa iyo "Sevha Se" kuraira. Nekuita izvi, iwe unonyora pasi iro rese faira, uchibvisa zvisina kushandiswa zvinhu uye zvakaunganidzwa shanduko. Mhedzisiro yacho idiki rePDF faira iwe raunogona kubata. Saka sarudza iyo "Sevha As" sarudzo kana iwe wawedzera zvese zvaunoda kuPDF yako.
Dzvanya uye udzikise saizi yemifananidzo yePDF
Zvichipa zvinoonekwa zvemadhijitari zvemukati nhasi, mifananidzo chikamu chikuru chemafaira ePDF. Nekudaro, kana yako PDF isina kuitirwa zvido zvepamusoro-soro, unogona kuchengeta yako faira mukutarisa nekudzora saizi uye kumanikidza mifananidzo yako. Nekudzikisa pasi bitmap mifananidzo, iwe unonyanya kudzikisa huwandu hwepikisheni, iyo inoderedza iyo yakazara resolution uye nekudaro saizi yePDF.
Sarudza iyo chaiyo kara nzvimbo
Iwe unogona kunge wakambonzwa nezve RGB uye CMYK nzvimbo dzevaravara kumberi. Imwe yeayo ane nzira dzakasiyana dzekubata ruvara. Kazhinji, CMYK yakanakira kudhinda, nepo RGB yakanakira kuratidzwa pa-screen.
Kana yako PDF ichizotariswa zvakanyanya pawebhu kana pakombuta, sarudza iyo RGB kara nzvimbo yemifananidzo yako yePDF. Mune vamwe vagadziri vePDF, unogona kusarudza kushandura mifananidzo yeCMYK kuRGB kana zvichidikanwa. Inoda data shoma pane CMYK. Uye shoma data chiteshi zvinoreva diki saizi saizi.
Gadzirisa mafonti ako
Nekusimbisa mafonti, iwe uri kunyatsovhara hunhu hwese hwakaiswa mukati mePDF, iyo inogona kubvarura iyo faira zvakanyanya. Edza kuisa masosi panzvimbo. Ichachengeta saizi rePDF kushoma.
Kana font iri subset, mavara emhando chete ayo anoshandiswa muPDF ndiwo anowedzeredzwa. Kana hunhu hwakadai se "#" husingashandiswe mufaira, hunhu hahuzoverengerwa. Muzviitiko zvakawanda, iwe unogona kusarudza otomatiki kuisa mafonti kana kushandiswa kwehunhu kuri pasi peimwe huwandu. Tora mukana wechiitiko ichi kana unacho. Mafonti ako ePDP akakosha kungofanana nemifananidzo yako.
Bvisa zvisina kufanira mafrizi
Zvichienderana nekuti ndiyani uye nezvako zvemukati zvePDF zvakagadzirirwa, iwe unogona kudzora bloat zvakanyanya. Zvishandiso zvinogadzira maPDF ezvimwe zvinodiwa, senge Adobe Photoshop, zvinokutendera kuti uchengetedze maPDF ane marongero epamberi senge Kuchengetedza Photoshop yekugadzirisa kugona.
Asi kana maPDF ako asina kungovhurwa muFotohop yekugadzirisa, saka hapana chikonzero chekuigadzirira iyo faira. Saka usati uchengetedze PDF neese mabhero uye miridzo, tora zano rakanaka rekuti PDF yako ingashandiswe sei uye unogona kudzikisira saizi nenzira kwayo.
MaPDF anofanirwa kunge ari emhando yepamusoro, asi hazvireve kuti iwo anofanirwa kuratidzwa muhukuru hwefaira. Iwe unogona kuwana inodzoreka faira rePDF nekungogadziridzwa mashoma. Uye sebhonasi yakawedzerwa, unogona kuita zvakawanda zveizvi zvigadziriso neSonic PDF Musiki. Iwe unongofanirwa kuenda kuTarisa> Zvisikwa zvisikwa ... uye iwe unokwanisa kuzviwana kuburikidza nebhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Nzira yekuderedza saizi remafaira ePDF?
Keys dzekudyidzana kwenyika dzeecommerce